Ngaphambi kokusungulwa abicah sealant emalungeni egcwele mastics okuzenzela, zonke izinhlobo putty izingoma ibitume, okuyinto abakwazanga ukuhlangabezana nazo zonke izidingo. Lapho emakethe wangena izinto ezintsha, enza zonke izinhlobo ukulungiswa lula, kanye izinga yabo liye lenyuka.
abicah sealant isakhiwo ufana nenye viscous, okuyinto enhle kakhulu ngoba uphawu amalunga imifantu, gluing futhi uphawu izingxenye ezisele nezingxenye ezahlukene. Uma lezi zithombe zabo zisitshekelwe kwamanzi, bavikeleka longasimuhle futhi umswakama.
Izinhlobonhlobo eyinhloko abicah sealant Ukwakheka
Ngiphakathi nendawo abicah sealant libhekwa ngu ukwakheka ingxenye. Ngo womshini ke ungakwazi ukwengeza izinto ezahlukene. Ngokwesibonelo, plasticizer kwenza izinto nokunwebeka, kuyilapho viscosity sithatha vulcanizer. Njengoba isizathu kuphuma iraba, kanye ukuphikelela sokuqanjwa unikezwa primer ebusweni.
Abakhiqizi amandla osekuzuziwe ngokusebenzisa-amplifier, kodwa umbala ingxube kuba ngemva kwalokho yamathebhu. Ngiphakathi nendawo abicah sealant babe munye-ingxenye noma ezimbili-ngxenye. Uhlobo lokuqala ngokuvamile ezisetshenziswa kuleli ukulungisa nokwakhiwa, kuyilapho Izingxube ezimbili ingxenye zenzelwe ukusetshenziswa ezimbonini.
Ukudayiswa kungabonwa ane-alikhali, acid sealants hlangothi. Eyokuqala inhlanganisela ngenhloso ekhethekile, futhi njengoba lezisekelo zawo aphume ashone ama. Uma ngaphambi kwakwakhe ukuthi emelelwa incwadi "A", ngalesosikhathi you azi ukuthi sealant acid, it has a eziphansi futhi enza izinto ezihlukahlukene iyasebenza. Lapho yokukhiqiza izenzo njengesisekelo acetic acid nephunga lapho ikhishwe ngesikhathi solidification uyaca. A Ububi imisindvo sinjalo ukungavumelani ezisansimbi nonferrous, ngoba ukusheshisa le nqubo ukugqwala. It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa izakhi esidi sealants zemabula, kanye usimende izinto, okuyinto unezithako ane-alikhali. Ngiphakathi nendawo abicah sealant kuhlangene evele ukuthi zenziwa noma iyiphi impahla, it kubangelwa Ukwakheka ingxenye, esekelwe utshwala noma ketoxime.
Ukwahlukanisa sealants kokungathathi hlangothi ngokuba fillers kanye izithasiselo
Lapho kokukhetha uhlobo oluthile sealant, kufanele sinake izithasiselo asetshenziswa womshini idatha ukwakhiwa. Kuze kube manje, ihlukanisa 4 izinhlobo izithasiselo, phakathi kwabo:
Nokho zombala kunezelwa ekukhiqizeni, ngemva iphele ingxube akuyona ezinemibala. Fillers ukunikeza adhesion mechanical nge ebusweni mass. Uma kuziwa anezele mechanical ke lapha kuzomele sifake kashoki asebenza ngebhethri uthuli. Extenders endabeni le sealants zinomsuka zemvelo, futhi iyadingeka ukwehlisa viscosity we abicah. Nesikhunta ukubulala isikhunta isikhunta. Ukuze sandise emkhakheni ukusetshenziswa kungaba sealant hlangothi, ngokucabangela ubunjalo okufakiwe.
Uphenyo Neutral Silicone sealant
Ngiphakathi nendawo abicah sealant inezici ezithile ezikhethekile: kuba soft futhi nokunwebeka. Naphezu kwalokhu, elisetshenziswa womshini ngezinto eziqinile kakhulu ngenxa Silicon uhlobo, asebenza ngebhethri futhi isihlabathi. Kulezi copolymers zenziwa, okuyingxenye. Abathengi secrete okumbalwa usebenzisa kokungathathi hlangothi abicah sealants, okungukuthi, ikhono yokwelula, izinga eliphakeme amandla, ukuzinza yelanga, i-adhesiveness okusezingeni eliphezulu, ukushisa ukumelana, ukumelana yizici zemvelo kanye biostability.
Amalungu baphikisa ngokuthi ikhono yokwelula evumela ukusetshenziswa kwalezi ukwakhiwa emalungeni ngezinhlamvu ezihlelwa ngesandla. Ngenxa izinga eliphakeme adhesion, Izingxube ezinjalo ingasetshenziswa emkhatsini wetincenye teluhlaka ingilazi, izitsha zobumba, metal, izinkuni kanye plastic. Ngemuva omiswe, abicah sealant kokungathathi hlangothi esobala zingavezwa ukuba nolaka yokuhlanza izingxenye, ngenkathi akaphelelwa impahla yayo. Uma kuba izinhlobo ukushisa ukumelana ukuthi uzokwazi ukugcina izakhiwo zabo ngisho nemibandela lokushisa ububanzi okuyinto kuhluka -50 kuya +300 ° C.
Ngenxa yokuthi nenye idatha ibhekane kahle umthelela izici zangaphandle, angasetshenziswa hhayi kuphela ngaphakathi kodwa ngaphandle kwezakhiwo zenkampani. Ngemva isicelo, ungakwazi ungesabi ukuthi sealant noma evele eduze kuyoba amagciwane noma isikhunta.
Yenhlanzeko Silicone sealant has a hlangothi, umbono umsebenzisi, nezinkinga ezithile. Phakathi kwabo kufanele egqanyisiwe:
ukungakwazi ukusebenzisa ku ezindaweni ezimanzi;
akukho amakhono staining;
insufficiently adhesion okusezingeni eliphezulu amapuleti emincane polypropylene.
Ibala sealant ebusweni emva solidification yayo akunakwenzeka lapho ingxube iqukethe semali izinto eziningi eziphilayo. Kodwa ukuntuleka adhesion kungabonakala nasemkhakheni futhi namanje phakathi amapuleti, okuyinto zenziwa polyethylene, polycarbonate noma fluoroplastic. Njengoba abasebenzisi abathi isixazululo kungenzeka ukuthenga sealant ezibizayo, okuyinto zenzelwe ukusetshenziswa emsebenzini.
Sibutsetelo sha "Moment" izici kokungathathi hlangothi abicah sealant
Sealant "Moment" abicah kokungathathi hlangothi ayinakho iphunga singasetshenziswa ezingeni lokushisa ezisukela +5 ukuba +40 ° C. Heat ukumelana ezisukela -40 kuya +150 ° C. Ngezinye ukudabuka sokuqanjwa sidluliselwa 200% kanye kwabantu bayo zingahluka kusuka 0.98 kuya 1.00 g / cm 3. Ngesinye ngamaphesenti ayikhulu ukunwebeka wemfihlo kuyinto 0.3 MPA. Ingxube asitholayo umswakama kahle, futhi ifilimu ngemva sebethule ezingeni lokushisa +23 ° C kwakhiwa emva kwemizuzu engu-15.
solidification izinga amaphesenti amahlanu nomswakama imayelana 2 mm ngosuku. Lokhu abicah sealant ezimhlophe kokungathathi hlangothi yakhelwe uphawu futhi ukufakwa izibuko, ukupholisa izinhlelo kanye nokuqondisayo. It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa ingxube noma itshe yemvelo bonyana batshidze okugcinwa.
Lithengiswa namhlanje zingatholakala kokungathathi hlangothi abicah sealants in ezahlukahlukene. Ethandwa kakhulu kuba TYTAN Professional, ubani kuyodingeka bakhokhe ruble 165. Ingxube kungaba ompunga, elinsundu, abamnyama, abamhlophe noma kungekho nto enemibala emihle. Uma sikhuluma ingxenye jikelele PUTECH, ke kuyodingeka bakhokhe ngoba ruble 123.
Ngiphakathi nendawo abicah sealant, intengo eye okukhulunywe ngaye ngenhla, ingasetshenziswa yezimoto ibhizinisi, ukwakhiwa, noma izicelo ezikhethekile. Ukwakheka Universal, isibonelo, ingasetshenziswa ukulungiswa ezincane ekhaya. Ingasetshenziselwa lapho uphawu futhi gluing izibani, emaceleni noma izibani.
Kodwa abicah sealant imoto, okuyinto black avame, kuyinto imisebenzi ukuze esikhundleni gaskets kukhona kule moto. Kafushane kule ngxube kungathinta izinga lokushisa kuze kufinyelele +300 ° C. Lapho usebenzisa ukwakheka akusho makhaza, bese lisetshenziswa ayikwazi ukuguga.